UBenni ucuthele esokuqeqesha i-AJax uma ibuya
UBENNI McCarthy, oke wacija iCape Town City, kuvela ukuthi ucuthele ukuqeqesha i-Ajax Cape Town uma inyukela kwi-Absa Premiership Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | February 13, 2020
MAKHULU amathuba okuthi isilomo somdlali waseNingizimu Afrika osephenduke umqeqeshi uBenni McCarthy sibonakale ebhentshini kwi-Absa Premiership ngesizini ezayo.
Nokho konke lokho kulele ekutheni i-Ajax Cape Town iyasidla yini isicoco seGladAfrica Championship.
Lokhu kuhlaluke enkulumeni yakhe uMcCarthy ayenze ohlelweni lomsakazo waphesheya kwezilwandle, iBBC Football, lapho ebegeqa khona amagula ngezinhlelo zakhe zokubuyela ebhentshini kusukela exoshwe yiCape Town City.
UMcCarthy, oneminyaka engu-42 ubudala, ukhonjwe indlela kwiCity ngoNovemba nyakenye ngoba kukhalwa ngokugqoza kwemiphumela. Yize lo mqeqeshi ebesedle isicoco neCity engakaqedi ngisho iminyaka emibili efikile kuyona, ugcine exoshwa indawo yakhe yathwathwa uJan Olde Riekerink waseHolland.
Maningi amaqembu abemataniswa noMcCarthy ngesikhahti exoshwa okuhlanganisa kuwona yona i-Ajax, Orlando Pirates neBafana Bafana uqobo.
Kuwona wonke la maqembu abekhonjwe kuwona, uMcCarthy mabili kuphela akhulume nawo. I-Ajax kanjalo neHearts yaseScotland lapho kuzinze khona umndeni wakhe.
Uvumile kwiBBC Football uMcCarthy ukuthi akajahile ukuthatha umsebenzi ngoba kufanele kube ovumelana nayo yonke impilo yakhe njengoba esanda kuthola ingane encane
“Konke kulele ekutheni mina ngiwubona kanjani lo msebenzi enginikwa wona. Kufanele ngigculiseke ukuthi iqembu lisesimeni esikahle kanti nosihlalo ungumuntu engingakwazi yini ukuxoxa naye sizwane? Uma kunjalo nakanjani ngingawugxumela lowo msebenzi. Ngeke ngithathe umsebenzi ngoba ngithi akukho lapho ngisebenza khona manje,” usho kanje.
Ubuziwe ukuthi njengoba kuke kwasabalala ukuthi uxoxa ne-Ajax, kuyiqiniso yini lokho?
Uvumile wathi: “Ukube umsebenzi we-Ajax bengiwufuna ngabe ngisebenza khona ngikhuluma nawe nje. Kunezikhathi lapho besixoxa khona impela nesinye sezikhulu ze-Ajax, * -Ari (Efstathiou) futhi sizwana. Umsebenzi ubuheha futhi ngibona ukuthi ngingawenza kodwa sikhulume ngesikhathi esingekho kahle.”
Yize engalibeki ngembaba, uMcCarthy kodwa kusolakala ukuthi ulinde ukubona ukuthi i-Ajax yenzenjani kwiChampionship njengoba iqhwakele ngamaphuzu angu-39 kwangu-36 oThongathi FC ababanga nayo isicongo. Bamiswe kabi yiSwallows FC enamaphuzu angu-34. Womathathu la maqembu anemidlalo engu-20.
“Ukube kuya ngami ngabe ngithatha umsebenzi emazweni afana neBelgium, Spain, Portugal noma khona eScotland kodwa ngenxa yebala lami angikholwa ukuthi ngizophumelela,” kusonga uMcCarthy.